‘Filannoo’ Sirna Fashistii Utubuuf Gaggeeffamu Irraa Qooda Fudhachuun, Yakka Ofii fi Saba Ofii Irratti Dalaguu Dha! – Kichuu
HomeAfaan OromooNews‘Filannoo’ Sirna Fashistii Utubuuf Gaggeeffamu Irraa Qooda Fudhachuun, Yakka Ofii fi Saba Ofii Irratti Dalaguu Dha!
Matakkalitti waraanni pp mana jireenyaa isaa keessaa erga qabanii booda obbo Tashoomee Nugusuu ajjeesanii bakkeetti reeffi isaa argame.
Benishangul Gumuz Godina Matakkal aanaa Dibaxii ganda Giiphootti jedhamu keessatti waraanni shiftootaa pp obbo Tashoomee Nuqus nama jedhamu waxabajji 15/2021 halkan mana jireenyaa isaanii keassaa butanii guyyaa lamaaf achi buteen isaanii dhabamee kan ture guyyaa kaleessaa waxabajji 17/2021 ganama reefii obbo Tashoomee Nugusuu laga irratti gatamee argamuu maddeen Sagalee Qeerrootti himaniiru.
Akka maddeen Sagalee Qeerroo jedhanitti ajjeechaan obbo Tashoomaa Nugusuu irratti raawwatamuun dura ajajaa hogganaa komandii poostii naannichaa kan magaalaa Gaalessatti argamuun doorsifniif itti dhaadachuun irra deddeebiin akka irratti gaggeeffamaa ture osoo lubbuun jiranii obbo Tashoomee Nugusuu himachaa akka turan beekuun danda’amera.
“Nuti filannoo irratti kan hirmaannu Paarlaamaa keessa teenyee harka rukkutuuf miti”
[SQ Waxabajji 18/2021]
Filannoo PPn cidha ittiin geggeeffattu kana qalbiin qarame dursee hubateera.
Haala filannoo fi filannoo keessaa ba’uu ABO ilaalechisee gaaffii Hayyu Duree ABO Jaal Daawud Ibsaaf dhiyaatee ture tokkotu “maaliif filannoo keessaa baatu; maaliif keessuma teessanii dhiibbaa hin gootani” kan jedhu ture.
Deebiin Jaal Daawud, “ABOn uummanni akka hireesaa murteeffatee mootummaasaa ofumaa filatu barbaada; kanaaf qabsaa’a. Amma uummanni keenya nagaa argataa hin jiru; biyyattiin nagaa hin qabdu. Lolatu jira, lola booda beelatu jira. Filannoon geggeeffamuuf nagaan jiraachuu qaba” jedhan.
“Nuti kan filannootti seennu nama lama sadii taanee paarlaamaa seennee harka rukkutuuf miti. Sana warri bara dheeraa rukkutaa ba’eyyu dhiisee ba’eera. Nuti Mootummaa uummanni keenya sagaleesaan ijaarrate arguu feena” jedhan. Har’a kanneen paarlaamaa keessaa harka rukkutuun injifannoo itti fakkaatu PP’f cidha bareechuuf dhama’u.
“Kana booda qofaa hin gubannu”
Siyaasa geggeessuun fageessanii waan fuulduraa arguu barbaada.
Kol. Gammachuu Ayyaanaa akkuma Addi Bilisummaa Oromoo fi EPRDF araaramanii hogganni ABO biyya galeen torban lama booda hidhame. Waggaa tokko turee akkuma ba’een ergaawwan jajjaboofi raaga uummatasaaf himuu eegale.
“Abiddi Oromootti qabate kun gaanfa Afrikaa guba” jedhe.
Abiddi sun Oromoo utuu gubuu amma gaanfa Afrikaa gubuutti jira.
“Amma booda garuu Oromoon qofaasaa hin gubatu” jedhe Kol. Gammachuun.
“Nagaan biyya kanaaf akka dhufu hawwama taanaan hunda dura ABOf nagaa kennuu feesisa” jedhe. “Yoo carraan kennameef Addi Bilisummaa Oromoo nagaa biyya kanatti fiduuf ga’umsa itti qaba” jedhe.
Har’a ABOf nagaa kennuu didnaan biyyi kun gubataa jirti; gaanfi Afrikaa jeeqamaa jira.
“Filannoon Itoophiyaa jeequmsaafi diigumsa biyyattiitti fida”
Filannoon Itoophiyaa bara kanaa kan filmaata hin qabne kun addunyaatti gaaffii ta’eera.
The Economist barruu qabatee ba’een “filannoo Itoophiyaa bara kanaa biyyattiitti qoqqooddaafi diigumsa fida” jedheera. “Abiy Ahmed akkuma haati isaa ‘ati nugusa taata’ jettee itti himtetti nugusummaa qabatee itti fufuu barbaada” Barruun The Economist kun “hoggantoonni paartilee morkattootaa mana hidhaa waan jiraniif, uummanni waan filatu hin qabu” jedha. “Kanaafuu, filannoon kun shakkii malee bu’aan isaa beekameera” jechuun ibsa. Filannoo dorgomaa hin qabne, kan haqa qabeessaafi bilisa hin taane kana addunyaan balaaleffatteetti.